Ambohijanahary Antehiroka : nahazo kilalao ny mpianatry ny Sekoly FJKM Tsitohaina | NewsMada
Ambohijanahary Antehiroka : nahazo kilalao ny mpianatry ny Sekoly FJKM Tsitohaina
Faly sy ravo ireo mpianatry ny FJKM Tsitohaina etsy Ambohijanahary Antehiroka, nahazo kilalao sahady ary nahazo tohan’aina avy amin-dRamatoa Andriantsitohaina Ginette.
Namangy ireo mpianatra 330 ao amin’ny sekoly FJKM Tsitohaina indray omaly Ramatoa Andriantsitohaina Ginette. Tsy tonga tamin’ny tanam-polo anefa izy fa nivatsy kilalao sy vatomamy ary biskoy ho an’ireo mpianatra tao amin’ity sekoly ity.
Efa fanaony isan-taona izao fizarana fanomezana izao indrindra rehefa ankatoky ny fetin’ny krismasy toy izao. Faly ireo ankizy satria nahatsiaro ho mitovy amin’ny zanak’olona rehetra izy ireo nahazo izany kilalao izany amin’izao fetin’ny Noely izao.
Zanaky ny fianakaviana sahirana ny ankamaroan’ny mpianatra ao amin’ny FJKM Tsitohaina, Ambohijanahary Antehiroka. Misy amin’ireo ray aman-dreny tsy manana fahefa-mividy izany kilalao izany ho an’ny zanany akory ka nankasitraka indrindra an-dRamatoa Andriantsitohaina Ginette amin’izao fanomezana izao.
Efa andrasan’ny mpianatra fatratra ny fandalovan’ity reny mpiahy ny sekoly ity rehefa fety. Tsy manadino ireo ankizy izy ary mitondra vary sy izay voatsirambin’ny tanana matetika ho an’ny sekoly.
Misakafo ao an-tsekoly ny ankamaroan’ny mpianatra ary fandraisan’anjara maivana ny an’ny ray aman-dreny amin’izany.Miezaka mamatsy kosa Ramatoa Andriantsitrohaina Ginette indrindra rehefa hasaramanitra.
Nirary fety sambatra sy taona vaovao ho an’ireo kilonga Ramatoa Andriantsitohaina Ginette ary mirary azy ireo ho tafita amin’ny fianarana izay hatao. Nanome toky ny tenany fa tsy hanadino ireo akizy mpianatry ny FJKM Tsitohaina ary manohana sy mitsidika azy ireo hatrany.